Gonzalo Higuaín oo sheegay inuu jeclaan lahaa u dhaqaaqista horyaalka Premier League – Gool FM
Gonzalo Higuaín oo sheegay inuu jeclaan lahaa u dhaqaaqista horyaalka Premier League
(Juventus) 06 Juunyo 2018. Weeraryahanka kooxda Juventus Gonzalo Higuain ayaa soo jeediyay inuu jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League, gaar ahaan xili ay saxiixiisa xiiseenayso kooxda reer London ee Chelsea.
Waxaa xiliyadii lasoo dhaafay isasoo tarayay wararka ku aadan in milkiilaha kooxda Chelsea ee reer Russia Roman Abramovich uu xiiseenayo lasoo saxiixashada weeraryahanka kooxda Juventus ee Gonzalo Higuain, si uu ugu noqdo badalka Alvaro Morata.
Gonzalo Higuain oo haatan 30 jir ah ayaa wuxuu Juventus kaga soo dhaqaaqay laba xili ciyaareed kahor kooxda Napol heshiis taariikhi ah ee ku kacay aduun dhan £ 75m, waxaana la filayaa inuu ka dhaqaaqo magaalada Torino kadib koobka aduunka ee 2018.
Higuain oo ka warbixinayay dareenkiisa ku aadan sida uu u doonayo u dhaqaaqista horyaalka Premier League ayaa wuxuu yiri: “Waxaan qandaraas kula jiraa Juventus, cidna iima sheegin inuu doonayo inaan kooxda ka dhaqaaqo”.
“Inaan ku biirayo Premier League, dhab ahaan waan jeclahay, waa horyaalka ugu quruxda badan caalamka, waxaana jeclaan lahaa inaan ka ciyaaro”.
Jose Mourinho oo saadaaliyay Group kasta oo Koobka Adduunka iyo Labada Xul ee ka soo baxeysa....
Toni Kroos oo ka hadlay eedeymaha Sergio Ramos kaga imaanaya dhaawacii uu u geestay Mohamed Salah